WordPress: Post WordPress Inoburitsa Otomatiki | Martech Zone
Chitatu, Kukadzi 21, 2007 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Mamwe mashoma emabloggi andakaverenga posvo pese panobuditswa WordPress. Zvinotombotsamwisa asi ini ndinofarira iyo nyaya yekuti vanhu vazhinji vane hanya uye vanoda kuburitsa izwi nekukurumidza. Kana iwe uri mumwe wevaya mabloggi ayo anoda kuitsigira, usazvinetse nekunyora posvo - ita WordPress otomatiki kuitumira kune yako blog uchishandisa post kuburikidza neemail!
Gadzira email, yakaoma kwazvo kero yeaccount yako kuti hapana munhu anofunga kufungidzira.
Gadzira Tumira Via Email muWordPress neiyo email kero uye yako imwe POP ruzivo:
Zvino chinyora kusaina Regedza Notification neiyo Email Kero pa WordPress:
Voila! Iye zvino WordPress ichatumira iyo Regedzera Notification yakanangana nekutumira pane yako saiti!
ZVIMWE ZVAKAITIKA: Ungangoda kuwedzera imwe kodhi kutsiva chero zvinongedzo kune yako email kero kana kunyorera zvinongedzo. Ini handisati ndagamuchira imwe yemaemail izvozvi… asi ini ndichaona kuti ndoita sei izvozvo kana ndangogamuchira yangu yekutanga.
Feb 28, 2007 at 12:52 PM
Pfungwa yakanaka. Kuwedzera kune izvo, ini ndinoziva zvechokwadi, iyi pfungwa yekutumira neemail ye wordpress haishande chaizvo.
Saka ini ndaikurudzira BlogMailr
Izvi zvinoshanda mushe sezvingaonekwa pane yangu posvo.